क्यारोलिना मोलिना लस ojos de Galdós | को लेखक संग साक्षात्कार वर्तमान साहित्य
क्यारोलिना मोलिना लस ओजोस डी गल्डेसका लेखकसँग अन्तर्वार्ता
फोटोग्राफी: क्यारोलिना मोलिना, फेसबुक प्रोफाइल।
क्यारोलिना मोलिना, पत्रकार र लेखक ऐतिहासिक उपन्यास, म्याड्रिडमा जन्म भएको थियो, तर वर्षौंको लागि ग्रानडासँग सम्बन्धित छ। त्यहाँबाट उनको पहिलो काम २०० 2003 मा आउनेछ, सबिका माथि चन्द्रमा। तिनीहरू उनको जस्तै पछ्याउँदछन् दुई भित्ताहरु बीच Mayrit, Albayzin सपनाहरु, Iliberri को जीवन o Alhambra को अभिभावक। Y अन्तिम एक हो गल्डसको आँखा। मँ साँच्चै यसको लागी तपाइँको समय र दया को कदर गर्दछु साक्षात्कार जहाँ उनले हामीलाई उनको र सब थोरैको बारेमा बताउँछन्।
क्यारोलिना मोलिना - साक्षात्कार
साहित्य वर्तमान: गल्डसको आँखा यो तपाईंको नयाँ उपन्यास हो, जहाँ तपाईं आफ्ना अघिल्ला पुस्तकहरूको थिमबाट टाढा जानुभएको छ। तपाईं हामीलाई यसको बारेमा के बताउनुहुन्छ र विचार कहाँबाट आयो?
मुख्यमंत्री: एक धेरै सानै उमेर देखि, Galdós पठन म संग हरेक गर्मी मा साथ। उहाँ मेरो ठाउँ म्याड्रिडको सन्दर्भमा हुनुहुन्छ, जस्तो ग्रानाडाको मेरो अंश फेडेरिको गार्सिया लोर्का। त्यसोभए लगभग नौ वा दस वर्ष पहिले डन बेनिटो पेरेज गाल्डेज को बारे मा एक उपन्यास लेख्ने विचार, उपन्यासकार जसबाट मैले लेख्न सिकेको थिएँ, मलाई प्रभावित भयो। मेरो अभिप्राय सिर्जना गर्नु थियो Galdosian सार उपन्यास। उसको वरिपरि संसारको पूर्ण दर्शन प्रस्ताव गर्नुहोस्: उसको आत्मीयता, उसको व्यक्तित्व, उपन्यासहरूको विस्तृत वर्णन गर्ने तरिका वा उनले कसरी उनले आफ्नो नाटकीय कार्यहरूको प्रीमियर सामना गरे। अब उहाँ एक सन्दर्भ भन्दा बढी छ, उहाँ एक काल्पनिक साथी हो कि म सधैं जान्छु।
मुख्यमंत्री: धेरै पछि, एक चालमा, उहाँ देखा पर्नुभयो मेरो पहिलो कथा। यो विभिन्न स्टिकी नोट पेपरमा लेखिएको थियो। यो मेरी आमाले मलाई बताउनुभएको कथा थियो र मैले यसलाई अनुकूलन गरें। थियो एघार वर्ष। त्यसपछि अन्य बाल कथाहरू र पछि पहिलो उपन्यास, कविता र थिएटर आयो। धेरै दशक पछि ऐतिहासिक उपन्यास आउनेछ। मैले पढेको पहिलो किताब थियो साना महिला। उहाँसँग मैले पढ्न सिकें, म यो कोठामा ठूलो स्वरमा जान्छु।
मुख्यमंत्री: पछि, कुनै श .्का बिना। न त म केहि नयाँ पत्ता लगाउनेछु: सर्भेन्टेस, फेडेरिको गार्सिया लोर्का र बेनिटो पेरेज गलाड्स। सबै तीनमा धेरै बिन्दुहरू समान छन् र मलाई लाग्छ कि ती सबै मेरा पुस्तकहरूमा प्रतिबिम्बित छन्।
मुख्यमंत्री: जो मार्च, को साना महिला। जब म उपन्यास पढ्छु मँ यो संग यति पहिचान गरीएको छ कि यो मलाई लाग्छ कि यो एक लेखक बन्ने मेरो निर्णय संग धेरै गर्न को लागी थियो।
सीएम: म धेरै उग्र छैन। मलाई चाहिएको छ मौन, राम्रो प्रकाश र एक कप चिया.
मुख्यमंत्री: भर्खर सम्म सम्म लेख्न को लागी सबैभन्दा राम्रो समय दिउँसो मा थियो, जब सबैजना एक झपकी लिइरहेका छन्। अब मेरो बानी बदलिएको छ मसँग निश्चित तालिका छैन। ठाउँ होइनयद्यपि सामान्यतया यो बैठक कोठा हो (जहाँ मसँग मेरो डेस्क हुन्छ) वा टेरेसमा।
मुख्यमंत्री: अवश्य। को कथा (छोटो कथा) र थिएटर। म पनि बारेमा भावुक छु ऐतिहासिक निबन्ध र जीवनी, विधाहरू जुन मैले आफूलाई कागजात देखाउने उत्साहका साथ पढें।
मुख्यमंत्री:म दुई पढ्दै छु जीवनी, s बाट ग्रानडा इतिहासकारको। XVI र स्पेनी पुनर्जागरण बाट एक धेरै जिज्ञासु चरित्र को। म उनीहरूको नाम भन्न सक्दिन किनकि यसले मेरो अर्को उपन्यासको विषय प्रकट गर्दछ। मैले सुरु पनि गरें नृविज्ञान रेमेडियोस सान्चेज को कविता मा गरेको छ Emilia Pardo Bazan (ड्रप विशाल समुद्र मा हरायो).
म के लेख्दै छु अब, कागजात चरणमा भएको कारण, म समर्पित छु सारांश, साहित्यिक स्केच र कथाहरु तयार गर्नुहोस् त्यसो भए मलाई उपन्यास बनाउने प्रक्रियाको सामना गर्न सहयोग गर्नुहोस्। यो लामो र श्रमशील तर आवश्यक अवधि हो। त्यसो भए, कुनै पनी दिन मा, लेख्न को आवश्यकता आउनेछ र तब साहित्य खेल को सबै भन्दा राम्रो शुरू हुन्छ।
AL: तपाइँ कसरी सोच्नुहुन्छ कि प्रकाशन दृश्य कस्तो छ? धेरै लेखकहरू र केही पाठकहरू?
मुख्यमंत्री: जब म सँधै लेख्न थाल्छु म प्रकाशित थियो कि स्पष्ट थियो। पाठकबिनाको उपन्यासको कुनै अर्थ छैन। केहि लेखकहरूले उनीहरू आफैंका लागि लेख्दछन् तर रचनात्मकता तपाइँले साझा गर्न आवश्यक छ। एक किताब केहि कुराकानी गर्न को लागी लेखिएको छ, त्यसैले यो प्रकाशित हुनु पर्छ। मलाई प्रकाशित गर्न तीस बर्ष लाग्यो। यदि मेरो पहिलो कथा एघार वर्षको थियो भने, म पहिलो चालीस वर्षको हुँदा मेरो पहिलो उपन्यास प्रकाशित गर्‍यो। बीचमा, मैले आफैंलाई पत्रकारितामा समर्पित गरेको थिएँ, मैले केही कविता र लघुकथा प्रकाशित गरेको थिएँ, तर उपन्यास प्रकाशित धेरै जटिल छ.
प्रकाशन परिदृश्य मर्दै छ। यदि यो गलत थियो भने, महामारीको आगमनको साथ धेरै प्रकाशक र पुस्तक पसलहरू बन्द गर्नुपर्‍यो। यसले हामीलाई पुन: प्राप्ति गर्न लाग्नेछ। सबै कुरा धेरै परिवर्तन भएको छ। म वास्तवमा धेरै आशावादी भविष्य देख्दिन।
मुख्यमंत्री: मैले एउटा संग महामारी शुरू गरें गाह्रो पारिवारिक रोग आत्मसात गर्न। COVID आइपुगे र मलाई फेरि परिवारको सदस्यबाट अर्को रोग लागेको थियो जुन अझ गाह्रो थियो। उनीहरु दुई धेरै जटिल बर्षहरु छन् जसमा मैले प्रतिबिम्बित गरेको छु र एक फरक तरीकाले र अन्य मूल्यहरु संग बाँच्न को लागी निर्णय गरेको छ। यसले मेरो साहित्य र मेरो बानीमा असर गरेको छ। सकारात्मक यो हो कि ती दुई व्यक्ति बिरामी परेका छन् जुन अहिले राम्रो छ, जसले देखाउँदछ कि जब पनि ढोका बन्द हुन्छ तिनीहरूले तपाईंको लागि विन्डो खोल्छन्। सायद यही कुरा प्रकाशित विश्वमा पनि हुन्छ। हामी पर्खनु पर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » क्यारोलिना मोलिना लस ओजोस डी गल्डेसका लेखकसँग अन्तर्वार्ता